Ukuphupha ngebhotile yamanzi ashushu Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ibhotile yamanzi ashushu luhlobo lwebhegi eyenziwe ngerabha eshinyeneyo ezaliswe ngamanzi ashushu kwaye itywinwe ngekepusi. Ubushushu abuncedisi kuphela xa ubandayo, kodwa kunye nokuxinezeleka okanye ukugula, ngakumbi iintlungu zesisu. Izimbozo ezithambileyo nezinemibala ziyafumaneka ezivenkileni, ezenza ukuba ulusu lunxibelelane nezinto ezigxothayo zibe mnandi. Isandulela sebhotile yamanzi ashushu isitena esasifudunyezwe sibekwe ebhedini. Emva kwexesha, kwavela intsimbi, iglasi okanye iibhotile zodongwe. Kwiimodeli zangoku, i-PVC yoyisile.
Nabani na ophupha ngebhotile yamanzi ashushu angangcangcazela ebuthongweni babo. Okanye ukuphupha kunemvakalelo yokugula. Imiba eyahlukeneyo enjengobushushu nengqele, kodwa kunye nenxalenye yamanzi, idlala indima ephambili ekutolikeni kwamaphupha.
1 Uphawu lwephupha «ibhotile yamanzi ashushu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ibhotile yamanzi ashushu» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ibhotile yamanzi ashushu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ibhotile yamanzi ashushu» - ukutolikwa ngokubanzi
Njengophawu lokulala, ibhotile yamanzi ashushu inokukukhuthaza ukuba ukhathalele impilo yakho. Ngokutsho kohlalutyo lwamaphupha, luphawu lokunqongophala kwamandla kunye nokuzithemba. Iqondo lobushushu elitofotofo elivela kwibhotile yamanzi ashushu limele kanye. YeNtlalontleukuba umntu ophuphayo ufuna okanye sele enakho ezandleni zakhe.
Nangona kunjalo, umfanekiso wephupha ungabonisa ulangazelelo lothando. Nangona kunjalo, ukuba ibhotile yamanzi ashushu ikwenza ubile ephupheni, inokwenyani inokuvela kwisimboli yephupha. kugula ukwazisa. Kwitoliki yamaphupha, nangona kunjalo, ubushushu obuvelayo bukwaluphawu lwenkanuko engalawulekiyo.
Ukuba umntu oleleyo uziva ebanda okokuqala ephupheni, uphawu lwephupha "ibhotile yamanzi ashushu" iphakamisa umbuzo ukuba yeyiphi indawo yobomi angenabushushu kuyo. Mhlawumbi umntu ophuphayo ukrwada kakhulu kwaye ukhohlakele xa ejongene nabanye. Ngokwenkcazo yamaphupha, uloyiko ukubekwa wedwa Khawuleza.
Ukuba iphupha lifuna ibhotile yamanzi ashushu kuba uziva iintlungu esiswini, umfanekiso wephupha ngamanye amaxesha unokubonisa nokubaxwa komzimba. Ngokunxulumene nebhotile yamanzi ashushu, amanzi ayiqulathe adlala indima ebalulekileyo. Kuhlalutyo lwamaphupha kubhekiswa kwi Ihlabathi elinemvakalelo kunye namandla okuyila amaphupha. Mhlawumbi okwangoku ukwinkqubo yokuqalisa imiba yakudala esele isonjululwe.
Uphawu lwephupha «ibhotile yamanzi ashushu» - ukutolikwa kwengqondo
Uphawu "lwamanzi ashushu" luphawu lwephupha olubandakanya uthando kunye nenkxalabo, kunye nokufudumala. Ubushushu obusasazekileyo bukwanika imvakalelo ye esperanzaukuba umnqweno wothando uya kuzaliseka. Ukunyuka kwamaqondo obushushu kubonakalisa inkanuko yeemvakalelo kunye nomnqweno wesini.
Isigqibo sokucaciswa kwamaphupha ziimvakalelo zalowo uleleyo ephupheni. Ukuba zilungile, uvulelekile kwiminqweno nakwiminqweno yakho. Ukuba, ngokuchaseneyo, umphuphi uziva engonwabanga, uphawu lwephupha "ibhotile yamanzi ashushu" luphawu lokuthintela ngaphakathi kunye nemiqobo ngokubhekisele kwisini somntu.
Ukuba ibhotile yamanzi ashushu iyabanda ephupheni, umfanekiso wephupha ubonakalisa ukuncipha kweemvakalelo ngokokuhlalutya kwephupha. I-subconscious yenza ukuba ukuphupha kwenzeke ukungakhathali ngokweemvakalelo ingqalelo Unokuziva ungamkelwa ngabanye.
Ukuba ibhotile yamanzi ashushu kufanele ukuba ikhulule iintlungu zesisu, uphawu lwephupha lubonisa uloyiko okanye uluvo olucinezelweyo ngokwesini esingalawulekiyo kunye neenkanuko. Amanzi afudumeleyo kwisitya amele, kutoliko lwengqondo ngephupha, imixholo yengqondo engekho zingqondweni. Ibhekisa kwicala lobufazi kunye neemvakalelo zomphuphi. Kule meko, ibhotile yamanzi ashushu ifanekisela amandla kunye nokuzala.
Uphawu lwephupha «ibhotile yamanzi ashushu» - ukutolika kokomoya
Nabani na obandayo ephupheni kwaye ke ngoko ufuna ukufudumala ngento ethile, kusenokwenzeka ukuba usandula ukuphulukana nomoya. Isimboli yephupha "ibhotile yamanzi ashushu" iyakuhlawulela oku, kuba ibandakanya ukutolikwa kwephupha lokomoya. uthando olungenamiqathango, Amandla obomi kunye nokuzalwa kwakhona.